Shirkadda Ampio waa abuuraha nidaamka Smart Home. Waxay ka kooban tahay dhowr darsin qalab oo noocyo kala duwan ah. Abuuritaanka guri caqli badan ayaa u baahan aqoon ku habboon oo aan si joogto ah adiga kuugu soo gudbinno. Dhisme la dego ayaa ka sii fiicnaan doona markaad isticmaasho qodobbada aan diyaarinnay.
Qolka Ampio ee Rybnik oo ka socda iFuture
ampio, Hoppe, bandhigga, Qolka bandhigga Ampio
Waan jeclahay inaan arko guryaha show, gaar ahaan kuwa si wanaagsan loo qabtay. Kama hadlayo ka hadalka qolka yar oo aan ku soo bandhigayo aaladda kontoroolka iyo labo dareemayaal oo aan ugu yeerayo guri show ah, laakiin qol dhab ahaan loo diyaariyey oo sameyn doona saameynta: waaw! Noocan oo kale ah ...
ampio, dib u eegista
Nidaamka AMPIO - waa maxay waxa ku saabsan?
ampio, CAN, Khadadka ugu muhiimsan, guri caqli badan
Ma taqaan AMPIO? Iyo baska CAN? Waxaan ugula xiriiray inta badan qaylo-dhaanta, mootada iyo la xiriirka mashiinka. Sidii ay noqotay, si sax ah waa sidaas, maxaa yeelay tani waa waxa AMPIO ay qabanaysay muddo dheer ka hor nidaamyada caqliga badan ...